आफ्नो मायालुलाई भन्नैपर्ने १५ वटा प्रेमील सन्देशहरु | Hamro Patro
शब्दको जादु एउटा अदभुत कुरा हो, अझ मायामा त शब्दको महत्व विशेष हुन्छ । यो फेब्रुअरी महिना, भ्यालेन्टाईन डे अनि आसपासका रोज डे, चकलेट डे लगायत अन्य विभिन्न दिवसहरुको संगालोमा यो महिना अनि मायाको मीठो अभिब्यक्तिको विशेष समबन्ध पाईन्छ ।
अनि हामी तपाईको आफ्नै मोबाईल सहयात्री, हाम्रो पात्रो पनि केही वाक्याशं मार्फत तपाई अनि तपाईको माया विचको सुमधुरता थप्नकालागी आएको छ, आउनुहोस यहाँकै प्रस्तुत छ, तपाईले आफ्नो मायालुलाई भन्नैपर्ने १५ वटा प्रेमील सन्देशहरु ।
अहिलेसम्म भेटिएका मध्य सबैभन्दा रोमान्टीक् वाक्याशंहरु, केवल तपाई अनि तपाईको प्रेमका लागी । आउनुहोस्, मायाका यी भावहरुमा डुबुल्की खेलौ ।
१ अनि तिम्रो त्यो मधुर मुस्कानमा मैले यी ताराहरु भन्दा पनि गज्जबको चमक पाउछु ।
२ मायामा पर्नु एउटा कुरा हो, कसैको माया पाउनु अर्को कुरा हो अनि माया प्रतिको यो दायित्वलेनै कसैलाई पक्का मायालु बनाँउदछ ।
३ अहिलेको यो पलमा जत्ति धेरै माया मैले तिमीलाई पहिले कहिले गरेको छैन अनि यो पलभन्दा रत्तिभर पनि कम माया म तिमीलाई भविष्यमा कहिल्यै गर्नेछैन, मेरो माया शुक्लपक्षको चन्द्र जस्तै सँधै तिम्रालागी बढिनै रहने छ ।
४ कहिलेकाँही तिमी र म साथ हुँदा, म आफूले आफूलाई देख्दिन, तिमी अनि तिमी भित्रको म मात्र देख्दछु ।
५ म तिमीलाई माया गर्दछु अनि याद राख यी मेरा माया कसैले लैजान सक्नेछैन्, हाम्रो माया अमर छ ।
६ चाहे जत्तिनै पर म भए पनि, अनि परदेश नै म गए पनि, मलाई तिमीसम्म फर्केर आउने बाटो याद रहेको छ, तिमी मेरो जिवन वृतको केन्द्रबिन्दु हौ ।
७ म तिमीलाई माया गर्दछु अनि तिमीलाई गुमाउने बारे म सोच्न पनि सक्दिन किनभने तिमीलाई भेटे पछी त मेरो जिवनमा राम्रा दिनहरु आएका हुन्, हैन र ? रगंहरु विनाको मेरो सादा जिवनमा तिमी आएपछी त रंगहरु थपिएका हुन्, अब त एक्लोपना सित मैले झगडानै गरिसके, याद नै सहि, मनमा तिमी छौ, मात्र तिमी ।
८ तिमीले के गर्यौ ? या हामीविच के भयो अनि तिमीले मलाई दिएका पिडाहरुनै सहि ? मलाई वास्ता छैन, कस्सम खान्छु, जबसम्म वाँच्नेछु, तिमीलाई नै माया गर्नेछु ।
९ म तिमीलाई माया गर्छु किनभने तिमी पनि म जस्तै त छौ, हामी एअर्काकै लागी बनिएका हौ ।
१० एउटा मोटो बच्चाले केक मनपराएकोजस्तै म तिमीलाई मनपराउछु, के हामीले बिताएका क्षणहरु केक को स्वाद भन्दा कम मिठा छन् र ?
११ मरेपछी पनि जिवन हुन्छ भन्दैथिए, म त त्यो जिवनमा पनि तिमीलाई नै माया गर्ने छु ।
१२ स्वार्थी मायामा मायालुहरु भन्ने गर्दछन कि म तिमीलाई चाहन्छु तसर्थ म तिमीलाई माया गर्दछु भनेर , तर मेरो माया स्वार्थी छैन्, म त भन्छु म तिमीलाई माया गर्दछु त्यसैले त म तिमीलाई चाहन्छु ।
१३ म तिमीसँग सम्पूर्ण रुपमा मायामा छु, ढिलै सहि तर आँट गरेर भन्दैछु, माया गर्छु । गाडि नहोला, घर नहोला तर मायाको छहारीमा तिमीलाई राख्नेछु । तिमी मलाई माया र विश्वाश देऊ, म तिमीलाई संसार दिनेछु ।
१४ म तिम्रा आँखामा मेरा बाँकी जिवन देख्दछु, मेरा आँखामा तिम्रा सपनाहरु छन्, आऊ सपना बाँढौ ।
म तिमीलाई छान्नेछु, छानिनैरहनेछु । मान्छेहरुको भीडमा, एक्लोपनामा अनि हरेक मोडमा, कुनै शंका बिना मेरा हृदयका धड्कनहरुमा तिमीलाई राख्नेछु अनि कुनै अवरोध विना हरेक धडकनका साथमा तिम्रा मायाका आभाषहरु म पाईनैरहनेछु ।
१५ मायाको स्पर्शसँगै हरेक हृदयहरु कवी बन्नेछन्, मेरो हरेक कविताहरु तिम्रालागी समर्पण गर्दैछु ।
माया पाउनुहोस् अनि माया बाढ्नुहोस्, बसन्तमा फूल्ने फूलहरुजस्तै रमाईलो होस् यो महिना
संकलन अनि अनुवाद